Indlu enkulu yaseSt
Indlu eqatywe ikalika sinombuki zindwendwe onguZoi
Iza kusetyenziswa nguwe yonke le indlu eqatywe ikalika (egrisi).
Ikhaya eliphangaleleyo elinembono entle yolwandle lwaseSt.Peter! Indawo ilungile kuba ulwandle lwaseSt.peter lukumgama wokuhamba nje (100m) kwaye izibuko laseGavrio kukuhamba ngemizuzu emibini. Ikhaya lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye likwindawo ezolileyo.Kukho amagumbi amabini okulala, amagumbi okuhlambela ayi-2, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi letafile, iiveranda ezi-2 ezinkulu, kunye nendawo yokupaka yabucala.
Ikhaya eliphangaleleyo lixhotyiswe ngokupheleleyo kwindawo ethe cwaka. Ikhaya linamagumbi okulala ama-2, amagumbi okuhlambela ayi-2, igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye negumbi letafile, iiveranda ezinkulu ezi-2, kunye nendawo yokupaka yabucala. Ikhaya linombono omhle wolwandle iAegean ukusukela ekhaya. ikwi-100m ukusuka eSt. Peter's Beach.
Ifakwe kwindawo ezolileyo ikhaya likumgama wokuhamba ukuya eSt. Peter's Beach (100m) Kumgama weSt.Peter's kukho iithaverna ezimbini zesintu, indawo yepizza & burger, ivenkile ethengisa ukutya, ivenkile yokubhaka kunye nendawo yokuzivocavoca.
Umbuki zindwendwe ngu- Zoi
Inombolo yomthetho: 00000696366
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R2689